Iza no Naharesy ny Vato Misakana Momba ny Fiteny?
MATOAN-DAHATSORATRA | TSY VATO MISAKANA INTSONY NY FITENY
Resy Ilay Vato Misakana
MISY fiteny 7 000 eo ho eo eran-tany. Mety hiteraka olana izany ho an’ny mpivarotra, mpampianatra, mpitondra fanjakana, ary mpanao dia lavitra. Efa nisy ny olana toy izany tamin’ny andron’i Ahasoerosy (mety ho i Ksersesy I) mpanjaka persianina, tamin’ny taona 475 Talohan’i Kristy (T.K.) tany ho any. Nizara ho faritany 127 mantsy ny fanjakany, “hatrany India ka hatrany Etiopia.” Tsy maintsy “nosoratana araka ny fomba fanoratra ao amin’ny faritany tsirairay sy araka ny fitenin’ny firenena tsirairay” àry ny didy navoakany. *
Tsy handika zavatra amin’ny fiteny maro be hoatr’izany ny ankamaroan’ny fikambanana ankehitriny, ary na ny fitondram-panjakana aza. Ny Vavolombelon’i Jehovah kosa mamoaka boky, gazety, Baiboly, raki-peo, ary video amin’ny fiteny 750 mahery. Anisan’izany ny tenin’ny tanana 80 eo ho eo. Mamoaka zavatra amin’ny soratra Braille ho an’ny jamba koa izy ireo.
Tsy nataon’ny Vavolombelon’i Jehovah hitadiavam-bola anefa izany. Samy miasa an-tsitrapo mantsy na ny mpandika teny ao amin’izy ireo, na ireo olona manao asa hafa. Nahoana àry izy ireo no miezaka mandika zavatra amin’ny fiteny maro be, ary ahoana no anaovany an’izany?
^ feh. 3 Jereo ny Estera 8:9.
Hizara Hizara Resy Ilay Vato Misakana